समाचार - कम्पोस्टेबल सामग्री के हो?
PLA क्लि W र्याप
गृह प्रयोग क्लि W र्याप
वाणिज्य प्रयोग क्लि W र्याप
PLA उच्च पारदर्शिता फिल्म
PLA स्ट्रेच फिल्म
कुकुर पप ब्याग
PLA कप ढक्कन
कम्पोस्टेबल सामग्री के हो?
कम्पोस्टेबल गिरावट बायोडिग्रेडेशनको सीमितता, माइक्रोबियल वातावरणको पदनाम, गिरावट समय, मानक र वातावरणमा प्रभाव हो। युरोपियन युनियनको यसका लागि परिभाषा छ, जुन "कम्पोस्टेबल सामग्री" को रूपमा वर्णन गरिएको छ। EN13432 अनुसार, कम्पोस्टेबल सामग्रीले बायोडिग्रेडेबिलिटीको विशेषताहरू देखाउनुपर्दछ, त्यो हो, कम्पोस्टिंग सामग्रीहरूको क्षमतालाई सूक्ष्मजीवहरूको क्रिया अन्तर्गत CO2 मा रूपान्तरण गर्न। यो सम्पत्ती प्रयोगशालाको मानक परिक्षण विधि द्वारा मापन गरिएको थियो: en14046 (iso१8585855 को रूपमा पनि खुलासा गरिएको: नियन्त्रित कम्पोस्टिंग सर्तहरूमा बायोडिग्रेडबिलिटी)। पूर्ण बायोडिग्रेडबिलिटी देखाउनको लागि, बायोडिग्रेडेशन स्तरको कम्तिमा% ०% ले6महिना भन्दा कममा पुग्नुपर्नेछ।
EU ले कम्पोस्टेबल डिग्रेडेबल सामग्रीमा नियमहरू जारी गर्दछ
विखण्डन पायलट कम्पोस्ट टेस्ट (en14045) मा मापन गरियो, अर्थात् विखंडन र दृश्य कम्प्युटमा दृश्यता गुमाउने (कुनै दृश्य प्रदूषण छैन)। परीक्षण सामग्रीको नमूना जैविक फोहोरको साथ months महिनाको लागि कम्पोज गरिएको थियो। अन्तिम कम्पोस्ट त्यसपछि २ एमएम चलनी मार्फत खोजी गरिन्छ। आकार> २ मिमीको साथ परीक्षण सामग्रीको अवशेषको द्रव्यमान मूलको १०% भन्दा कम हुनेछ।
कम्पोस्टेबल सामग्रीको चक्र प्रक्रिया
कम्पोस्टिंग प्रक्रियामा कुनै नकारात्मक प्रभाव भएन, जुन पायलट मापन कम्पोष्टि test परीक्षणले प्रमाणित गर्‍यो। भारी धातुहरूको कम स्तर (दिइएको अधिकतम तल) र अन्तिम कम्पोस्टिंगमा कुनै नकारात्मक प्रभावहरू (जस्तै कृषि मूल्यहरूको कटौती र बोटको वृद्धिमा इकोटोक्सिकोलॉजिकल प्रभावहरूको उपस्थिति)। प्लान्ट ग्रोथ टेस्ट (परिमार्जित ओएसीडी २०)) र अन्य फिजियोकेमिकल विश्लेषण कम्पोस्टिंगमा लागू गरियो जहाँ परीक्षण सामग्रीको गिरावट आयो।
बायोडिग्रेडेबल सामग्री हामी (वुहु रडार प्लास्टिक कम्पनी लिमिटेड) उत्पादन उत्पादनका साथ
हामी PLA र PBAT लिइरहेका छौं हाम्रो बायोडिग्रेडेबल उत्पादनहरूका लागि हाम्रो प्रमुख सामग्रीहरूको रूपमा। त्यस्तै
१, पीएलए क्लि w र्याप, पीएलए स्ट्रेच फिल्म, पीएलए प्याकिंग फिल्म;
२, पीएलए ब्यागहरू (बायोडिग्रेडेबल डग पप ब्याग, बायोडिग्रेडेबल रद्दी टोकरी), जुन PLA + PBAT हो;
,, पीएलए स्ट्रउ, बायोडिग्रेडेबल पीएलए पिउने स्ट्रु।
हाम्रो उत्पादनहरू सबै १००% बायोडिग्रेडेबल र कम्पोस्टेबल हुन्, जुन EN13432, ASTM D6400, BPI, FDA, अनुमोदित छ।
ठेगाना:भवन 4, सान्तांग औद्योगिक पार्क, नं 33 338, जिहुआ नर्थ रोड, वुहु, अन्हुइ,
कम्पोस्टेबल फोहोर ब्यागहरू, इको क्लिंग र्याप चिनी र्‍याप, बायोडिग्रेडेबल कम्पोस्टेबल रद्दी टोकरी, बायोडिग्रेडेबल स्ट्रेच फिल्म, बायोडिग्रेडेबल क्लि W र्याप, कम्पोस्टेबल ब्यागहरू,